घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू बेल्जियम फुटबल खेलाडीहरू जेरेमी डोकू बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो जेरेमी डोकु बायोग्राफीले तपाईंलाई उसको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, व्यक्तिगत जीवन, जीवनशैली र नेट वर्थको बारेमा तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा हामी तपाईंलाई घानियन वंशको एक पेशेवर फुटबलरको पूरा जीवन इतिहास दिन्छौं। हाम्रो जेरेमी डोकुको यात्राको शुरुआती दिनहरूमा शुरू हुन्छ जब उनी खेलमा प्रसिद्ध भए।
जेरेमी डोकुको जीवनी संस्करणको आकर्षक प्रकृतिमा तपाईंको आत्मकथा भूख मिटाउन, हामी तपाईंलाई ग्यालरी उठाउन उसको बाल्यकाल प्रस्तुत गर्दछौं। कुनै श doubt्का बिना, यसले उसको जीवन ईतिहास सारांश दिन्छ।
जेरेमी डोकु जीवनी - उनको प्रारम्भिक जीवन र उदय हेर्नुहोस्।
हो, तपाइँ र मलाई थाहा छ उहाँ एक समान प्रजाति हो किलियन एमपीपी र Alphonso Davies - गति को सर्तमा। हामी जेरेमीलाई प्रशस्त स्प्रिन्ट गति, त्वरण, फुर्ती, सन्तुलन र विस्फोटक ड्रिब्लिling शैलीका लागि मन पराउछौं।
प्रशंसकको बाबजुद, उनका केही प्रशंसकहरूले जेरेमी डोकुको जीवन कहानी का संक्षिप्त लेखहरू पढेका छन्। हामीले यसलाई तयार गर्‍यौं, बेल्जियम र फुटबलको प्रेमको लागि। अब थप विज्ञापन बिना, हामी सुरु गरौं।
जेरेमी डोकू बाल्यकाल कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, बेल्जियम उपनाम राख्छ - नयाँ इडन ह्याजार्ड। जर्मी डोकूको जन्म मे २००२ को २th तारिखमा उनको आमा, बेलिंडा डोकू र बुबा डेभिड डोकू, बेल्जियमको आन्ट्वर्पमा भएको थियो।
कस्तो संयोग!! जापान र दक्षिण कोरियामा २००२ विश्वकप सुरु हुनुभन्दा ठीक चार दिन अघि बेल्जियमका पेशेवर फुटबलरको जन्म भएको थियो।
परिवारमा आफ्नो स्थान को बारे मा, जेरेमी चार बच्चा मध्ये दोस्रो छोरा र छोरा छ उसका आफ्ना आमा बुबा - डेभिड र बेलिंडा। बुबा र आमा दुवैले राम्ररी विवाह गरेको वर्षौं भइसकेको छ।
जेरेमी डोकुका अभिभावक - श्री र श्रीमती डेभिड र बेलिंडा डोकूलाई भेट्नुहोस्। दुबै धेरै अनुकूल छन्।
जर्मी डोकू बेल्जियमको आन्ट्वर्प सहरको बोर्गरहउटमा हुर्केका थिए। यस फुटबलरले आफ्नो अधिकांश रमाईलो बचपनका बर्षहरू आफ्नो जेठो दाइसँगै बिताए जो जेफरसन डोकुको नामले जान्छ।
अझ, बेल्जियमका फुटबलर दुई साना बहिनीहरूसँग पनि हुर्केका थिए, जसले पनि आफ्नो शुरुआती वर्षहरू पूरा गरे। बचपन व्यावहारिक रूपमा जेरेमी डोकू र उनका भाइबहिनीहरूका लागि स्वर्ग थियो।
त्यसबेला, जेरेमी डोकुका अभिभावक टेरेस्ड घरमा बस्थे जुन चिडियाघर र बोसुइल स्टेडियमको बीचको आधा बाटो हो। यो खेल मैदान एन्ट्वर्पमा अवस्थित बेल्जियम फुटबल क्लब रॉयल एन्ट्वर्पको फुटबल मैदान हो। यदि तपाईंलाई थाहा थिएन भने, यो केवलaमिनेटको ड्राइभ हो जहाँबाट उसको परिवार बस्थ्यो।
जेरेमी डोकुको परिवार बोसीलस्टाडियनमा रोयल एन्ट्वर्प पुग्ने स्टेडियममा ढु stone्गा फ्याँकिएको थियो।
जेरेमी डोकूका आमा-बुबाले उनलाई र उनका भाइबहिनीहरूलाई हुर्काएको कुराको आधारमा, तपाईं आफ्नो भाग्यसँगको सम्बन्ध महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। Bosuilstadion फुटबल मैदानको धेरै नजिकै हुर्किएकोले सुन्दर खेलप्रति उसको उत्कटता जगायो।
के तपाईंलाई थाहा छ?… उसको परिवारको घरबाट, जेरेमीले रोयल एन्ट्वर्प फ्यानहरू उनीहरूको स्टेडियमबाट कराउँदै गरेको हल्ला सुन्न सक्छिन्।
बेल्जियमका फुटबलर बोसुइल्स्टाडियनको नजिकको पक्षले पनि चिड़ियाघर एन्ट्वर्पेनका राम्रा सम्झनाहरू राख्थे, जहाँ उहाँ, जेफरसन र उनका दुई बहिनीहरू अक्सर बच्चाहरूको रूपमा भेट्नुहुन्थ्यो। साँच्चै, फुटबल, यसका साथै, उसको सम्पूर्ण बाल्यकाल पूर्ण भयो।
जेरेमी Doku परिवार पृष्ठभूमि:
तपाइँलाई यो जान्न चासो लाग्न सक्छ कि बेल्जियम एक स्पोर्टी घरबाट आएको हो। प्रेस पाठकका अनुसार गति जेरेमी डोकूको परिवारमा चल्दछ। उसको बुवासँग यससँग प्रशस्त मात्रामा थियो र एक पूर्व एथलीट हुन प्रयोग गर्‍यो।
तिनीहरूको रगतमा गति भएको अन्त हुँदैन। जेरेमीको जेठो दाइ जेफरसनको पनि यस्तो गुणहरू छन। उसको सानो भाइले जस्तै, ऊ पनि एक फुटबलर हो।
जेरेमी डोकूका बाबुआमाले उनलाई बेल्जियमको दोस्रो ठूलो शहर (एन्ट्वर्प) को भित्री उपनगरीय शहरमा हुर्काउन सक्ने कुराको स .्केत दिन्छ कि उनी एक सहज मध्यम-वर्ग परिवारबाट आएका हुन्।
उनका बुवा, डेभिडका अनुसार, उनले जेफर्सन, जेरेमी र केटीहरूलाई हुर्काउने ठाउँको राम्रो प्रतिष्ठा छैन। एन्ट्वर्पको त्यो हिस्सा अधिकांश समय गरीबी, अपराध र तस्करी को समस्या संग सम्बन्धित छ। उनको टिप्पणी थप्दा, जेरेमी डोकूकी आमा (बेलिंडा) एकचोटि भने;
त्यहाँ, तपाईं चाँडै खराब मान्छेहरूलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। मदिरा र ड्रग्स सजीलै हुन्छन्, र बच्चाहरू होशियार भएनन् भने। म भाग्यमानी थिए किनकि मेरो दुई छोराले फुटबल मन पराउँथे।
जेरेमी डोकू परिवार मूल:
उसको उपस्थितिको आधारमा, तपाईं बेल्जियमको अफ्रिकी जरा हो भनेर भन्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि एन्ट्वर्पको भित्री उपनगरमा जन्मिए पनि जेरेमी डोकू परिवार घानाको मूल हो।
एक पटक गोल्ड कोस्ट भनिन्थ्यो, यो देश गिनीको खाडी र अटलांटिक महासागरको किनारमा छ, पश्चिम अफ्रिकाको उपन्यासमा। यहाँ घाना छ, जहाँ जेरेमी डोकूको परिवारको जरा छ।
ठीक १ 1993 XNUMX in मा र उनका अजन्मे बच्चाहरूको लागि अझ राम्रो जीवनको खोजीको कारण जेरेमी डोकुको बुबा (डेभिड) ले जीवन परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे। उनी घानामा आफ्नो विस्तारित परिवार बेल्जियममा काम गर्न राजी भए।
आफ्नी श्रीमती (बेलिंडा) संग, डेभिड बसासिए र बेल्जियमको उत्तरी भागमा एन्ट्वर्पमा बसोबास गरे। नौ वर्ष पछि, शहर मा, तिनीहरू जेरेमी थियो। फेरि, दुई साना बहिनीहरू जेरेमीका भाइबहिनी हुन पछि आए।
जेरेमी डोकू शिक्षा:
बेल्जियमका फुटबलर उसको प्राथमिक स्थान एन्ट्वर्पमा प्राथमिक स्कूली शिक्षा प्राप्त गरे। फुटबलले उनलाई शहरबाट लगे पछि पनि जेरेमीले आफ्नो पढाइ जारी राखी। आफ्नो अभिभावकको सल्लाहका कारण, उनले आफ्नो फुटबल क्यारियर र अध्ययनको बीचमा मल्टिटास्किंग गरे।
अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाले उनी ब्रसेल्सको एक बोर्डि school स्कुलमा पढेका थिए। १२ वर्षको उमेरदेखि जेरेमी डोकू एन्डरलेक्टको पर्पल ट्यालेन्ट बोर्डि school स्कूलमा गएका थिए। माध्यमिक संस्थाले उनलाई स्कूलमा फर्कनु अघि क्लबको साथ दिउँसो दुईको बीच फुटबल प्रशिक्षणमा भाग लिन अनुमति दियो।
जेरेमी डोकु फुटबल कहानी:
स्टारडमको लागि यात्रा छ वर्षको कोमल उमेरबाट सुरु भयो। २०० 2008 मा, उनका आमाबुवा (डेभिड र बेलिन्डा) ले उनका छोरालाई KVC ओलम्पिक Deurne (सानो बेल्जियमको टीम) डेभिलहरूको लागि परीक्षणका लागि लगे।
आफ्नो परिवारको घरको नजिक अवस्थित, KVC ओलम्पिक Deurne मात्र एक दस मिनेट ड्राइभ टाढा छ। आफ्नो परिवारको आनन्दको लागि, एक महत्वाकांक्षी जेरेमीले उडान र colors्ग द्वारा परीक्षण पार गरे।
सानो जेरेमीले ओलम्पिक Deurne, एक अकादमीको डेबिल संग फुटबल खेल्न शुरू भयो जुन पछि Tubantia Borgerhout को सहयोगमा गयो जो उनीहरूको साझेदार र ठूलो टीम हो। ठूला प्रतिष्ठानहरूको लागि अवसरहरू खोल्नको लागि, जेरेमी डोकू उनीहरूसँग सामेल भए।
ट्युबान्टिया बोर्गरआउटसँग खेलेको बार्ली एक वर्ष, यो जवानले एक निकास विकल्प खोज्न थाले। यो किनभने क्लब दिवालिया भयो। टुबान्टिया बोर्गरहाउटको व्यापार नजिक आएपछि, जेरेमीले स्थिर एकेडेमीको खोजी शुरू गरे।
बियर्सकोट एसी कहानी:
अझै पनि, उत्तरी बेल्जियम शहरभित्र, जेरेमी आन्ट्वर्पको सर्वश्रेष्ठ एकेडेमीमा बस्छन्। बियर। बियर्सकोट एसी उसको परिवारको घरबाट १ away मिनेट मात्र टाढा छ र युवा प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय ख्यातिमा प्रोजेक्ट गर्नका लागि प्रसिद्ध एकेडेमी हो।
के तपाईंलाई थाहा छ? ... दक्षिणी एन्ट्वर्पमा अवस्थित बेल्जियम क्लबले यस्ता खेलाडीहरू उत्पादन गरेको रूपमा चिनिन्छ; टोबी एल्डरवेयरल्ड, Mousa Dembélé, Radja Nainggolan, जन वेर्टनघेन र विक्टर वान्यामामा आदि
बेरसकोटमा हुँदा जेरेमीले आफ्ना पाइला पछाडि हिर्काए Radja Nainggolan उसले आफ्नो मूर्ति बनायो। उनका बुबा डेभिड डोकू भन्छन्, बियरशटमा यो स्पष्ट भयो कि उनी कस्तो प्रतिभा हो। सम्मिलित भएको एक वर्ष भित्र, जेरेमी जो आफ्नो पक्षको नेता देखिन्छ, आफ्नो टीमलाई प्रख्यात युवा ट्रफी जित्न सहयोग गर्‍यो।
जेरेमी डोकु जीवनी - फेम टु फेम स्टोरी:
जब उक्त जवानले बियरसकटको लागि त्यो ट्रफी जित्यो, तब उनी एक राष्ट्रिय स्टार बन्ने सम्भावना रहेको कुरा प्रस्ट देखिन्थ्यो। उनको उल्लेखनीय गुण बुझ्दै, देशका सब भन्दा ठूला क्लबहरूको एक होस्टले आफ्ना बाबुआमालाई उनीहरूको लागि छोरा साइन इन गराउन राजी गराउन खोज शुरू गर्‍यो।
२०१२ मा, १० बर्षको उमेरमा, RSC Anderlecht भाग्यशाली टीम भयो जसले जेरेमीमा हस्ताक्षर गरे। ऊ अझै स्कूल पढिरहेको थियो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै क्लबले उनलाई छात्रवृत्ति प्रस्ताव गरेको बोर्डि facility्ग सुविधामा उनीहरूको नाम दिइयो Anderlecht को बैजनी प्रतिभा बोर्डिंग स्कूल.
पहिलो पटक, जेरेमी डोकू आफ्नो परिवारलाई एन्ट्वर्पमा छाडे र बेल्जियमको दक्षिणी भागमा south० किलोमिटर दक्षिणतिर यात्रा गरे र आफ्नो नयाँ वातावरणलाई समर्पण गरे। पहिले नै भनिएझै क्लबले उसको माध्यमिक शिक्षाको ख्याल राख्यो।
Anderlecht मा जीवन:
उसको नयाँ क्लबमा, जेरेमीले धेरै राम्रो खेलाडीहरू देखे। ती मध्ये, उहाँसँग ड्रिब्लिंग र वेगको लागि धेरै गुणस्तर थियो। कि उसले U12 बाट उसको ट्रेनर Stéphane Stassin लाई प्रभावित गरे।
माध्यमिक विद्यालय पूरा गर्ने उनको खोजीको कारण, प्रशिक्षण सीमित भयो। त्यो भएता पनि उनले खेलमा राम्रो प्रदर्शन गरे। त्यस्तो उपलब्धिले उसलाई बेल्जियम U15 युवा टोलीमा कल प्राप्त गर्‍यो। जसै उनी क्लबको क्रममा अगाडि बढ्दै थिए, त्यसरी नै उनले राष्ट्रिय युवा स्तरमा गरे।
किशोरावस्थाको अन्त्यतिर आइपुग्दा, जेरेमी डोकुले पिचमा फरक व्यक्तित्व विकास गरे। उसले उपनामहरू पायो "अहंकारी एक र Dribbles को राजा"किनकि उसले बलमा आफ्नो खुट्टा राख्यो र विरोध पत्रहरू आउन को लागी ऊ पर्खिरहेको थियो। जब तिनीहरू आउँछन्, उनले ती चीजहरू तान्छन् र आफ्ना खुट्टा फेरि बलमा राख्छन्।
गोलको लागि जानुको सट्टा, जेरेमी डोकू आफ्नो खुट्टा बलमा राखिरहे, आफ्ना विरोधीहरू फर्केर आउन पर्खिरहे। युवा कोच Stéphane Stassin उनीसँग बौलाहा भए र धेरै पटक उनलाई गोल गोल गर्न सल्लाह दिए। जेरेमीका टिमका साथीहरूले पनि बल कम पायो किनकि उनी सँधै साथ थिए, आफ्ना विरोधीहरूलाई अपमान गर्दै।
जब जेरेमी डोकू प्रशिक्षण समाप्त गर्दछन्, ऊ एकदम छिटो उठ्छ किनभने उसले खाने, नुहाउने र स्कूलमा जानको लागि १० मिनेट छ। एक दिन, जेरेमी बल मा समात्छिन् र उनको कोच बोलायो उनलाई ड्रिबल गर्न - जुन उनले केहि नयाँ शैलीको शैलीमा गरे। उनको कडा परिश्रमका लागि उनको प्रशंसा गर्दा स्ट्याफेन स्टेसिनले जेरेमीलाई सल्लाहको एक टुक्रा दिए;
जेरेमी, यदि तपाईं ठूलो क्लबमा खेल्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले ड्राइबिंग बाहेक अरू केहि गर्नु पर्छ।
त्यो सल्लाह सीधा उसको मुटुमा जान्छ किनकि ऊ फेरि आफ्नो काममा र मद्दत गर्ने काममा फर्कन्छ। जेरेमीले आफ्नो खेल एन्डरलेक्टका लागि उमेर समूहका सब भन्दा महत्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा कायम राख्यो।
१ 15 वर्षको उमेरमा उनले स्थानान्तरण प्रस्तावहरू लिन थालिसकेका थिए। उनले युरोपको सबैभन्दा ठूला क्लबहरू मध्ये - - between बीचमा छनौट गरे। आर्सेनल, चेल्सी, डच क्लबहरू तर विशेष गरी लिभरपुल उनलाई चाहन्थे। रेडहरूले विशेष रूपले २०१ok/२०१ season सिजनको सुरूवातमा Doku बाहुला खींच्यो।
जनवरी २०१ 2017 मा, लिभरपूलले जेरेमी डोकूका आमाबुवालाई आफुसमेत उनीहरूको सुविधाहरू भ्रमण गर्न आमन्त्रित गरे स्टीवन गेरार्ड र जर्जेन क्लप्प। इ England्ल्यान्ड क्लबले उनलाई उनीहरूको प्रोजेक्ट समझायो - कि उनी एक दीर्घकालीन उत्तराधिकारी हुनेछन् Sadio Mané.
सत्य भन्ने हो भने, दुबै डेभिड र बेलिन्डा डोकू (उसको बुवा र आमा) लिभरपूलको खेल परियोजनाबाट मात्र नभई आर्थिक सुरक्षाबाट पनि वञ्चित भए। सानो बिजुली-द्रुत flank हमलावर (जेरेमी) पहिले नै लिभरपूलको मीठो कुराकानीमा टाढा भएको थियो।
Anderlecht लिभरपूल सस्तो मा आफ्नो सर्वश्रेष्ठ खेलाडी हराउन कहिल्यै चाहँदैन। उहाँलाई हराउने डरको कारण, क्लबले उनीहरूको एक विगतको नायकलाई भेट्नुपर्‍यो - व्यक्तिको Romelu Lukaku। जेरेमीले उनीप्रति राखेको ठूलो सम्मानका लागि धन्यवाद, बिग बेल्जियम एक मात्र त्यस्तो व्यक्ति मानिन्थ्यो जसले जेरेमी डोकुलाई बस्न मनाउन सक्थे।
के तपाईंलाई थाहा थियो? ... क्लबले लुकाकू र जेरेमीको बीचमा सत्र मिलायो जहाँ दुबै भिडियो कल मार्फत बोले। त्यो बैठकमा पौराणिक बेल्जियमका स्ट्राइकरले भने;
नमस्ते Jérémy, म रोमलु हुँ। तपाईं जस्तै, म वर्षौं Anderlecht मा खेलें। यदि म तपाईंलाई केही राम्रो सल्लाह दिन सक्छु, म विश्वास गर्दछु कि तपाईं यो क्लबसँग बस्नुहुन्छ, कम्तिमा पनि एकेडेमी फुटबलबाट स्नातक प्राप्त गर्नुहोस्।
धन्यवाद, स्टीवन गेरार्डधन्यबाद जर्जेन क्लप्प, तर मसँग भएकोमा धन्यवाद। लिभरपूलले दिएको खगोलीय खण्डहरूको बावजुद जेरेमीले लुकाकूको सल्लाह अनुसरण गरे। यो Anderlecht को लागी एक ठूलो राहत थियो जो अब उनीहरु आफ्ना औंलाहरुमा चिप्लिएको देख्दैनौं।
आफ्नो परिवार र क्लबको खुसीको लागि, जेरेमी डोकूले २०१ professional/२०१ season सत्रको सुरुमा आफ्नो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। तपाईंले उनको पछाडिको आइडल (लुकाकु) को फोटो याद गर्नुभयो?
जेरेमी डोकू बायो - सफलता कहानी:
जब ऊ एन्डर्ल्टसँगै बस्ने निर्णय गरे हामी धेरै खुसी भए उनका बुबा डेभिड। त्यो भन्दा पहिलेको अवधि परिवारको लागि धेरै गाह्रो थियो किनकि उहाँमा धेरै चासो थियो। जेरेमीको नियत एन्डरलेक्टको साथ पहिले सफल हुने हो।
त्यस समयमा डोकूले आफ्नो करारमा हस्ताक्षर गरे, माध्यमिक विद्यालय सकियो। त्यसपछिको जीवनले उनले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान प्रशिक्षणमा केन्द्रित गरेको देखे। कुनै समय मा, सबैले उहाँबारे कुरा गर्न थाले, उनी बेल्जियमको भविष्य हो भन्छन्। त्यो त्यो विस्फोट गर्न गइरहेको छ।
के तपाईंलाई थाहा थियो?… जेरेमी डोकु १ years बर्ष र १ 16२ दिनको उमेरका थिए जब उनी एन्डरलेक्ट ईतिहासको सबैभन्दा कान्छो डेब्यून्टहरू मध्ये एक भए। केवल क्लब आइकनहरू जस्तै रोम्लु लुकाकू (१ years बर्ष ११ दिन), Youri Tielemans (१ years बर्ष 16२ दिन) र अरु पहिले पनि थिए।
जेरेमीलाई पहिलो टीममा एकीकरणको साथ कुनै समस्या थिएन किनभने ऊ शारीरिक र एथलेटिक रूपमा आफ्नो लागि नाम बनाउन तयार छ। भिडियोमा अवलोकन गरिएझैं, किशोरले वयस्कहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ र जब उनी बलसँग नाच गर्छन्, सबैलाई थाहा थियो कि उसले केहि विशेष गर्न जान्छ।
उनले बेल्जियम लिगलाई देख्न सुरु गर्नुभन्दा पहिले यो समय लिनुभएन किनभने उहाँ पहिले नै उसको लागि एकदम सानो नै हुनुहुन्थ्यो। यो त्यस्तो बेला आयो जुन यूरोपका धेरै ठूला क्लबहरू उनको हस्ताक्षरका लागि घुँडा टेकेका थिए।
फ्रान्स र राष्ट्रीय टीम मा सफलता:
अन्त्यमा, रोयल स्पोर्टि And क्लब एन्डरलेक्ट - जसलाई उनीहरूले बोलाउँदछन् - उनीहरूले जे चाहन्छन् त्यही पाए। तिनीहरूको उद्देश्य उनीहरूको तारा म्यानको मूल्य बढेको हो जुन उनीहरू स्थानान्तरण नगद-बाहिर गर्न सक्थे। अक्टूबर २०२० को 5th तारिखमा, डोकूले रेन्नेसलाई २ for करोड युरोको लागि हस्ताक्षर गरे। उनले विश्वको सब भन्दा ठूलो लिगमा प्रवेश गरे।
Stade Rennais फुटबल क्लब मा उनको आगमन देखि, अगाडी को क्षमता शक्ति देखि ताकत मा प्रगति भएको छ। ठूला नामहरू जस्तै खेल्दै स्टीवन Nzonzi र एडुआर्डो कामाविन्गा जेरेमी डोकू मा सबै भन्दा राम्रो बाहिर ल्याएको छ।
क्लब फुटबलमा ठूलो वृद्धिले उसको सम्पूर्ण परिवारलाई पर्खिरहेकै क्षणको कारण भयो। डोकुले सेप्टेम्बर २०२० को u तारिखमा बेल्जियमको राष्ट्रिय टोलीमा फोन गरे। उनको राष्ट्रिय पदार्पणको तीन दिन पछि उनले युएफा नेशन्स लिगमा बेल्जियमको लागि पहिलो गोल गरे।
जवानले आफ्नो सीवी बढावा दिँदै उसले धेरै लुकाउने प्रदर्शनहरू थपेका छन् जुन सबै तलको भिडियोमा सारिएका छन्। यस समयमा, त्यहाँ जेरेमी बल संग गर्न नसक्ने केहि पनि थिएन। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, उसको प्रकारको स्वभाव सिकाउन सकिदैन।
उनी बेलारसको बेलारसको आठ गोल रद्दीटोकरीको हिस्सा थिए:
२०२१ को सुरुमा जेरेमी डोकूले राष्ट्रिय र in्गमा आफ्नो उल्का वृद्धिलाई निरन्तरता दिए। २०२२ विश्वकप क्वालिफायरको बखत, नगेट Michy Batshuayi, Leandro Trossard, डेनिस प्रेट, क्रिश्चियन बेंटे रद्दीटोकरीमा मिल्दा बेलारुस goals गोलहरू केहि पनि छैन। को भिडियो हाइलाइट हेर्नुहोस् बेल्जियमले बेलुकी बेलुका -8-० लाई कुल्चेर प्रेरित जुर्मी डोकूको साथ.
निस्सन्देह, विश्वले जेरेमी डोकूलाई विश्व स्तरीय अगाडि बढिरहेको देख्यो, हाम्रो आँखाको अगाडि। Foot फिट Spe स्पीड ड्रिबलर बेल्जियमबाट बाहिर आउँदै गरेको दायाँ वि of्गरहरूको अन्तहीन उत्पादन लाइनको बीच एक उत्तमको रूपमा लेबल गरिएको छ। बाँकी, हामी उनको बायो भन्छौं, अब इतिहास हो।
जेरेमी डोकुको प्रेमिका वा पत्नी हुन को हुनुहुन्छ:
सफल हुनको लागि र क्लब र राष्ट्रिय फुटबलको विशाल मागहरूको लागि, प्रशंसकहरूले केवल एक भनाइलाई प्रतिबिम्बित गर्न यो सामान्य हो। त्यो प्रत्येक सफल फुटबलर पछाडि, एक गर्लफ्रेंड वा WAG हुनु पर्छ। यस कारणले गर्दा, लाइफबगरले जेरेमी डोकु डेटि is गरिरहेको छ भनेर निर्धारण गर्न अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ।
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो हो कि त्यहाँ जेरेमीको सुन्दर देखिन्थे कि महिलाले आफूलाई सम्भावित पत्नीहरू, प्रेमिका र आफ्नो बच्चाको आकांक्षी आमाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने थिएनन् भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्ने कुनै ठाउँ छैन।
फुटबल - घाना ब्लगका अनुसार, जेरेमी डोकूका आमाबुबा मध्ये एक - विशेष गरी उसको बुवा (डेभिड) ले पुष्टि गरे कि उनका छोराको मे २०२० सम्म कुनै गर्लफ्रेंड थिएन। यो उनको अक्टूबर २०२० रेनेमा बसाइँ सर्नु भन्दा पहिलेको हो।
यद्यपि यो बायो राख्ने बित्तिकै हामी यो कुरामा विश्वस्त छौं कि उहाँ राजधानी पश्चिम ब्रिटनीको उत्तर-पश्चिम फ्रान्समा एक्लै घुमफिर गर्नुहुन्न। तसर्थ, त्यहाँ फुटबलर एक गोप्य सम्बन्ध भएको सम्भावना छ, त्यो सार्वजनिक हुनुहुन्न, कम्तिमा अहिलेको लागि।
जेरेमी डोकु व्यक्तिगत जीवन:
सबैभन्दा पहिला, उहाँ एक शान्त केटा हुनुहुन्छ जसले आफ्ना खुट्टाले कुरा गर्न रुचाउनुहुन्छ। तपाईं यो सधैं बुझ्न सजिलो छैन। यो किनभने तपाईलाई थाहा थिएन कि जेरेमी आफ्नो अनुहार देखिन्छ।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, जेरेमी डोकु एक नम्र युवा छ, एक गलतफहमी भएको व्यक्तित्वको साथ। ध्यान दिनुहोस्। ऊ अहंकारी थिएन। जेरेमी एक सामान्य युवा हो, जो एक विदेशीको रूपमा देखिनु हुँदैन। तपाईं उनको व्यक्तित्व उसलाई एक जटिल मामला को एक प्रकारको बनाउँछ। जेरेमी डोकुको उद्धरणको सब भन्दा राम्रो यो हो कि उसलाई जानको लागि राखिएको छ;
ठूला सपना देख्नुहोस्, डरले जीवनको दौड जित्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
फुटबलरको बारेमा थाहा पाउनु पहिलो कुरा के हो भने ऊ सामान्य मानिस जस्तो देखिन्छ जो उल्लेखनीय शान्त छ। जेरेमी आफैंमा यति धेरै राख्छिन् कि तपाईंले उसलाई विशेष गरी उसको घरमा साथीहरूसँग भेट्नुहुनेछैन।
फुटबलबाट टाढा उनका बुबा (डेभिड) ले टिप्पणी गरे कि उनका छोरा दिनभर घरमा बस्न सक्छन्। साथै, जेरेमी आफ्नो कन्सोल वरिपरि हुन मन पर्छ। जहाँसम्म गेमि concernedको सवाल छ, उनी फिफाको सट्टा PES सँग टाँसिएको देखिन्छ।
जेरेमी डोकु जीवनशैली:
अघिल्लो सेक्सनमा, हामीले बुझ्यौं कि बेल्जियमको स्पीस्टर एक लामो छ। जेरेमी डोकुको व्यक्तित्व सरल छ। ऊ त्यस्तो व्यक्ति हो जुन खोज्दैन र व्यक्तिसँगको अन्तर्क्रियामा सक्रियताका साथ संलग्न हुन्छ। अब यस सेक्सनमा, हामी तपाइँलाई भन्छौं कसरी उसले आफ्नो पैसा खर्च गर्दछ।
जेरेमी डोकू कारहरू:
हो, ऊ मोटर प्रेमी हो। फुटबलरले आफ्नो रंग फिट गर्ने कारहरू लिन मनपराउँछ। बेल्जियमले एक पटक यस अटोमोबाईललाई प्रशंसकहरूले उनको नवीनतम संग्रह देख्नको लागि अपलोड गरे। जेरेमी डोकू विदेशी वा फ्ल्यास प्रकारको कार ड्राइभ गर्दैनन् तर एउटा उसको नम्र प्रकृति अनुरूप छ।
के तपाई सचेत हुनुहुन्छ? ... जेरेमी डोकुको ज्याला यस प्रकारको सपना कार किन्नको लागि पर्याप्त छ। उहाँ यहाँ आफ्ना टीमका साथीहरू र हामीले क्लबको पार्टनरहरू द्वारा मोटर शोकेसको रूपमा सन्दर्भ गरेको चित्रण गर्दैछन्। सारांशमा, हाम्रो केटा एक विवेकी व्यक्ति हो जसले एक विनम्र जीवनशैली बिताउँछ।
जेरेमी डोकू पारिवारिक जीवन:
बोर्गरहाउट मूलका लागि उनका आमा (बेलिंडा) र बुबा (डेभिड) ले उनको लागि गरेका बलिदानहरू उनको जीवनको सबैभन्दा ठूलो आशिष हो। वास्तवमा, उसको रेनेस ज्यालाले कुनै पनि राशिले आफ्ना आमाबुबा र भाइलाई गरेको प्रेमलाई हटाउन सक्दैन जुन उसको एक उपलब्धी मनाउँदै चित्रण गरिएको छ।
हाम्रो पारिवारिक जीवन सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई घरको टाउकोबाट शुरू गरेर उसको परिवारका सदस्यहरूको बारेमा अझ बढी कुरा गर्ने छौं।
जेरेमी डोकू फादरको बारेमा:
उनी एक मानिस हुन् जसले आफ्नो छोराको लागि राम्रो प्रिमेसन राख्ने कलामा पोख्त भएका छन्। जेरेमीको बारेमा डेभिडले पाएका प्रायः सबै चीजहरू सत्य साबित भए। जब उनले आफ्नो सफलताको अन्य पक्षहरूमा आफ्नो पदार्पण गर्ने मितिहरूको भविष्यवाणी गर्न बाट। तपाईं एक धेरै जीवन्त मान्छे को यो oracle देख्न, उनी आफ्नो छोराको मुख्य पुजारी र आफ्नो सफलता को मास्टरमाइन्ड छ।
जेरेमी डोकू आमाको बारेमा:
स्पिड Dribbler बग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आकांक्षी छ कि उसलाई आफ्नो क्यारियर मा धेरै पैसा बनाएको देख्नुहुनेछ। के तपाईंलाई थाहा छ? ... केवल एक महिला लगातार उनको स्वास्थ्य अघि पैसाको छनौट गर्ने खतरहरूको बारेमा उसलाई सूचित गर्दछ। उनी आफ्नो आमा, बेलिंडा डोकूबाहेक अरू कोही छैन।
जुर्गेन क्लोपको लिभरपूलले लोभ्याए पछि, जेरेमीले लिभरपूलले उनलाई प्रस्ताव गर्ने वचन दिएका ठूलो रकमको समाचार पाएपछि उनी आफ्नी आमाकहाँ दगुरे र चिच्याए;
आमा, आमा ..., यो हो, अन्तमा, हाम्रो परिवार धनी हुनेछ!
लिभरपूल प्रशिक्षण केन्द्रमा जेरेमी ज्याकूजीसँग ज्यादै प्रभावित भएकी थिई, जुन उसले पहिले देखेको थिएन। अपेक्षित रूपमा, बेलिंडाले उनलाई शान्त गर्नुपर्‍यो, जसले उसलाई वरिष्ठ फुटबलमा स्नातक नभएसम्म RSC Anderlecht को साथ जारी राख्नु पर्ने आवश्यकता बुझाइदियो।
जेफरसनको बारेमा, जेरेमी डोकूको भाई:
एकपटक एक महत्वाकांक्षी फुटबलर, ऊ एक हो जसले आफ्नो सानो भाईलाई फुटबलको बाटो देखायो। के तपाईंलाई थाहा थियो?… जेफरसन पनि जेरेमी जत्तिकै छिटो छ। यो संकेत गर्दछ कि गति परिवारमा चल्छ। छिटो छिटो बाहेक, उनी आफ्नो दाइजोको भाई मात्र हो। हामीसँग यसको प्रमाण छ।
जेरेमीले जस्तै, जेफरसन पनि एन्डर्लेक्टसँग खेले - तर सफल भएन। उनका बुबा डेभिडका अनुसार उनका जेठो छोराले लामो समयसम्म राम्रो सेवा क्लबको लागि बोलाएनन्। यसै कारण, उसले आफ्नो साना भाईलाई व्यवस्थापन गर्ने सपना त्यागे।
यहाँ जे भयो त्यसले जेफरसनलाई साहसी निर्णय लिन बाध्य तुल्यायो। अक्टूबर २०२० तिर जेरेमी १ Ren वर्षीय फुटबलर रेनेसलाई सरुवा गरे जब उनका परिवारलाई छोडेर उनी वास्तवमै घरधनी हुनेछन् भन्ने डर थियो।
साँच्चै, जेरेमी जस्ता किशोर किशोरीका लागि फ्रान्समा वरिष्ठ फुटबल खेल्नको लागि आफ्नो देश छोड्नु सजिलो छैन। कसैलाई उसको जस्तो अन्तर्मुख हुनेको लागि, यो सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ। व्यक्तिगत स्तरमा, जेरेमी डोकूको परिवारका प्रत्येक सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा गम्भीर असर पर्ने डर थियो।
संग एक साक्षात्कार मा Het Laatste Nieuws, बेल्जियमको आन्ट्वर्पमा रहेको डच भाषाको अखबार, जेफरसनले एक पटक भनेका थिए;
मेरो आमा सबैभन्दा धेरै डराउनुभयो। मलाई थाहा छ उनी जेरेमी एक्लै बसिरहेको देख्न धेरै गाह्रो हुन्छ। यसको कारणले गर्दा, म त्यसो गर्न इच्छुक छु - मेरो क्यारियर छोड्नुहोस् - मेरो भाईको लागि।
त्यो हो। जेफरसनले सबै कुरा त्यागिदिए। उसले आफ्नो जीवनलाई केवल उसको सानो भाईलाई सपनामा बाँच्न सहयोग पुर्‍यायो। ऊ दाइ भन्दा धेरै छ, तर एक साँचो मित्र हो।
जेरेमी डोकु तथ्यहरू:
तथ्य # १ - ऊ ड्रेसिंग रूममा धेरै स plays्गीत बजाउँछ:
सबैलाई थाहा छ उहाँ एक विवेकी व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आफ्ना भावनाहरू कडासित देखाउनुहुन्छ र धेरै मिल्ने साथीहरू राख्न घृणा गर्नुहुन्छ। यद्यपि हामीले उसको अन्तर्मुखी प्रकृतिलाई अपवाद पायौं। के तपाईंलाई थाहा थियो? ... जेरेमी एक वास्तविक खेलाडी ड्रेसिंग कोठा ड्राइभर हुन सक्छ।
प्रत्येक पटक जब उहाँ लाकर कोठामा पुग्नुहुन्छ र वायुमण्डल त्यति प्रसन्न हुँदैन देख्नुहुन्छ, उसले आफ्ना सहकर्मीहरूको मुडलाई उठाउन केहि गर्छ। उसको साथीका अनुसार मार्को काना;
जेरेमी सबैको बीचमा संगीत र नृत्य लगाउँछिन्। अन्तमा, सम्पूर्ण लोकर कोठा उसलाई पछ्याउँछ र वातावरण तातो हुन्छ। यस्तो किसिमको चरित्र पाउनु राम्रो लाग्छ।
तथ्य # २ - संगीतको उसको प्रकार:
जेरेमी डोकुको मिडिया लाइब्रेरीमा, तपाई केही चीज पाउन सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले R'n'b, डच र्‍याप समावेश गर्दछन् मेम्फिस डिप्टी र Quincy Promes) र अफ्रो संगीत - जुन उसको घानियन जातीय पृष्ठभूमिमा सम्बन्धित छ। कुनै श doubt्का बिना, संगीत भनेको मदिरा हो जसले जेरेमी डोकूको मौनताको कप भर्छ।
तथ्य # - - जेरेमी डोकू रेनेस पगारी ब्रेकडाउन र तुलना:
युरो (€) मा Jér Emy Doku Rennes आय
प्रति वर्ष: € 2,083,200
प्रति महिना: € 173,600
प्रति हप्ता: € 40,000
प्रति दिन: € 5,714
हरेक घण्टा: € 238
हरेक मिनेट: € 4
प्रत्येक सेकेन्ड: € 0.07
तपाईं जेरेमी Doku हेर्न शुरू गर्नुभयोको बायो, यो उनले Rnes संग कमाएको छ।
जेरेमी कहाँबाट आउँदछन्, औसत बेल्जियममा २ 26,000,००० EUR कमाई उसले बर्ष र months महिना काम गर्नुपर्नेछ जुन उसले एक महिनामा घरमा लिन्छ।
तथ्य # - - जेरेमी डाकू गति तथ्यहरू:
यदि तपाईं एक क्यारियर मोड प्रेमी छिटो युवा खिलाडी मन पराउनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई जेरेमी साइन-अप सल्लाह दिन्छु। आफ्नो जीवनी लेख्ने क्रममा, विन्डकिडसँग 94 accele त्वरण, speed ० गति, ag ag चपलता र of 90 को सम्भावित रेटिंग छ। वास्तवमा हामी उहाँलाई फिफामा विश्वको सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभाको रूपमा देख्छौं।
Lifebogger तपाईंलाई जेरेमी डोकुको ग्रोथ टेस्टको एक फीफा २१ क्यारियर मोड प्रयोग गरी भिडियो परिणाम दिन गहिराइमा पुगेको छ। उत्तेजनाको अन्त्यमा, उनका शक्तिहरू from१ बाट बढेर 21 १ भन्दा माथि पुगे - समान क्रिस्टियानो रोनाल्डो.
तथ्य # - - जेरेमी डोकूको धर्म:
सर्वप्रथम, ऊ बाइबलीय पुल्लिंगीको नाम बोकेको हुन्छ जुन पुरानो नियमको यर्मियाको नाम हो। साथै, उनको आमाको नाम 'बेलिंडा' एक ईसाई केटीको नाम हो। जेरेमी बुबाको नाम 'डेभिड' बाइबलीय नाम हो। अन्तमा, उनको भाइको नाम 'जेफरसन' एक ईसाई केटाको नाम हो।
निहितार्थ द्वारा, जेरेमी डोकू एक ईसाईको जन्म भएको थियो। उनको व्यक्तित्व (उनको बायोमा वर्णन गरे अनुसार) हामी इसाई धर्मप्रति उसको भक्तिको स्तरबाट अनजान छौं।
जेरेमी डोकुको जीवनीले हामीलाई सिकाउँछ, कि सकारात्मक बाल्यावस्थाको अनुभवले राम्रो भविष्यलाई ढाल्नमा भूमिका खेल्छ। जेरेमी डोकूका आमाबुवा (डेभिड र बेलिंडा) उनीहरूको बच्चाहरूलाई घरमा राखिए, केवल छ मिनेटको दूरीमा एन्ट्वर्पको सबैभन्दा लोकप्रिय स्टेडियममा।
बोसीलस्टेडियन फुटबल मैदान (रोयल एन्ट्वर्पको घर) ले बाल्यकालमा सकारात्मक प्रभाव पा affected्यो। यसले जेरेमीको फुटबल खेलको सपना उसको ठूलो भाई जेफरसनसँगै प्रज्वलित गर्‍यो। आफ्नो डेबिट अघि, जेरेमी सामान्य जनताको लागि अपेक्षाकृत अज्ञात थियो। आज, उहाँ आफ्नो परिवारको सपना मात्र बाँच्नुहुन्न। जेरेमीले घानालाई (उसका माता-पिताको देश) गर्व बनाएकी छ।
बेल्जियमको सब भन्दा सम्भावित स्पीस्टरको जीवन कथा पढ्न हामीसँगै बस्नुभएकोमा धन्यवाद। Lifebogger मा, हामी तपाइँलाई बेल्जियम फुटबलरहरूको जीवनी जारी गर्न जारी प्रतिबद्ध रहन्छौं। अझ बढि, हाम्रा लेखकहरू शुद्धता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछन्।
कृपया यदि तपाइँ भेट्टाउनुभयो भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् - केही पनि - जुन हाम्रो जेरेमी डोकुको जीवनीमा राम्रो देखिदैन। अन्यथा, कृपया हामीलाई हाम्रो टिप्पणी सेक्सनमा foot फिट inches इन्च फुटबलरको तपाईंको धारणा बताउनुहोस्। Doku को संस्मरणको छोटो सारांशको लागि, हाम्रो Wiki तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
जेरेमी Doku Wiki पूछताछ
पुरा नाम: Jérémy Doku
जन्म मिति: 27 मई 2002
जन्मस्थान: एन्ट्वर्प, बेल्जियम
अभिभावक: बेलिंडा डोकू (आमा) र बुबा, डेभिड डोकू (पिता)
Siblings: जेफरसन डोकू (एल्डर भाइ) र दुई बहिनीहरू
शिक्षा: Anderlecht को बैजनी प्रतिभा बोर्डिंग स्कूल
उचाइ: 1.71 मीटर (5 फुट7मा)
प्लेयर एजेन्ट: आईसीएम तारकीय खेलहरू